Nayakhabar.com: दशैंमा लुगामा दाग लाग्यो ? चिन्ता नगर्नुस यस्ता छन उपाय
दशैंमा लुगामा दाग लाग्यो ? चिन्ता नगर्नुस यस्ता छन उपाय
काठमाडौं । दशैं सकिदै छ । दशैं मनाएर धेरैजसो कर्मथलोतिर लाग्ने तरखरमा छन् । तर दशैंको रमाइलोमा रमाउँदा कपडा विभिन्न खालका रंगिन डोब अर्थात दागहरु लागेका हुन सक्छन् ।
दशैंमा किनेका नयाँ र आफुलाई मनपर्ने लुगामा दाग लाग्दा कसलाई पो नराम्रो नलाग्ला र ? कतिपय दागहरु डिटर्जेन्ट र सावुनका साहयताले धुँदा जाने भएपनि मासुको चिल्लो, बेसारको पहेंलो, केही अविरका रातो दागहरु भने कडा हुन्छन्, धुँदा सहजै जाँदैनन् ।
त्यस भए के गर्ने त ? चिन्ता नलिनुस् । कपडामा लागेका त्यस्ता हटाउने उपाय पनि छन् ।
यस्ता छन् दाग हटाउने उपाय
१) खानाको दाग
यदि तपाईंको कपडामा खानेकुराको दाग लागिहाल्यो भने चिन्ता नलिनुस् । पिउने सोडा तपाईंको कपडा जोगाउन वरदान सावित हुनसक्छ । तत्काल तपाईं नजिकैको किराना पसलमा पाइने सोडाको प्रयोग गर्नुहोस् । सोडालाई दाग लागेको ठाउँमा सिधै प्रयोग गर्नुहोस् र सफा गर्नुहोस् । कपडाबाट दाग हटेको लागेपछि यसलाई पानीमा पखाल्नुहोस् र सुकाउनुहोस् । यसबाट तपाईंले आफ्नो कपडा पुनः पहिलाको जस्तै दारहित पाउनुहुनेछ ।
२) मासुको लेदो
रगत मात्र होइन, मासुको ग्रेबी पनि दशैंमा तपाईं हामी धेरैको समस्या हो । तर, अब मासु खाँदा तपाईंको कपडामा लाग्ने ग्रेबीको अथवा चिल्लो दागलाई समस्याका रुपमा लिइहाल्नुपर्दैन । चिल्लो लागेको ठाउँमा मकैको पिठो हल्का छर्कनुहोस् । त्यसपछि मकैको पीठोले उक्त चिल्लो विस्तारै सोस्दै जान्छ । यसलाई केही मिनेट यत्तिकै छाडिदिनुहोस् र त्यसपछि ब्रस गर्नुहोस् । अब तपाईं जुनैपनि बेला ढुक्कसँग मासु खान सक्नुहुन्छ ।
३) रगतको टाटो
दशैं र मासु लगभग पर्याय जस्तै हुन् । हामीमध्ये धेरै मासुबीना दशैंको स्वाद पाउँदैनौं । तर त्यही मासुका कारण कपडामा लाग्ने दाग तपाईंको चिन्ताको विषय पनि बन्न सक्छ । मासु काट्दा वा पकाउँदा उछुट्टिने रगत तपाईंको कपडामा लाग्नसक्छ र तपाईंको कपडा बिग्रनसक्छ ।
यदि त्यसो हो भने तपाईं तत्काल घाउ सफा गर्ने हाइड्रोजनको प्रयोग गर्नुहोस् । हाइड्रेजनलाई रगतको टाटो बसेको ठाउँमा लगाउनुहोस् र पत्ति, चक्कु लगायतका धार भएका बस्तुको प्रयोगले त्यसलाई विस्तारै हटाउनुहोस् ।
४) घाँसे दाग
तपाईं कतै जाँदा या बस्दा कपडामा घाँसको हरियो दाग लाग्न सक्छ । कुनै विरुवाबाट सरेको रंग सहजै जाने भएपनि कुनै विरुवाको दाग भने निकै जिद्धी हुन्छ । यदि त्यस्तो दाग सहजै नगएको अवस्थामा तपाईंको घरमा रहेको पुराने टुथब्रस र टुथपेष्ट निकै काम लाग्न सक्छ । दाग लागेको ठाउँमा टुथपेष्ट लगाएर हल्का ब्रस गर्नुहोस् र केहीबेरको ब्रसपछि सफा पानीले पखाल्नुहोस् । यसले तपाईंको लुगामा लागेको घाँसे दाग हट्छ ।